“Kalidou Koulibaly waa Ronaldaha kooxda Napoli” – Gool FM
“Kalidou Koulibaly waa Ronaldaha kooxda Napoli”
Haaruun February 27, 2019
(Roma) 27 Feb 2019. Tababarihii hore ee Talyaaniga Fabio Capello ayaa aaminsan in Daafaca Kalidou Koulibaly uu qiimo weyn ugu fadhiyo kooxda Napoli.
Capello oo ka hadlayay kulanka Axadda dhex mari doona Napoli iyo Juventus ee ka tirsan Serie A-da Talyaaniga ayaa waxa uu xusay in inkastoo tartanka Horyaalku u muuqdo mid dhammaaday haddana kulankaasi yahay mid xafiltankiisa gooniga ah wata.
“waxay iila muuqataa in Horyaalka ay dhibcihiisa la fogaatay Juventus oo 13 dhibcood ku hoggaaminaysa laakiin ciyaarta Napoli iyo Juventus waa mid xiisaheeda leh” ayuu Capello u sheegay ‘Il Mattino’.
Wuxuu xusay Capello in Juventus saxiixii ugu fiicnaa xagaaga ee ay sameysay uu ahaa markii ay soo iibsatay Ronaldo, waxaana uu carrabka ku dhuftay in Juventus ay dhaqaale ahaan aad hanti badan u heysato.
Mar uu ka hadlayay xidigga Ronaldo oo kale u dhigma ee ka tirsan Napoli waxa uu Macallinkii hore uu yiri “Shaki kuma jiro waa Kalidou Koulibaly, waa mid awood badan xirfad daafacna leh, haatanna wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda ugu fiican dunida, waana Ronaldaha Napoli”.
Jose Mourinho oo si dadban u tilmaamay kooxda uu doonayo in uu tababare u noqdo
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Arsenal Vs Bournemouth